Color Call Flash အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
4.4 | 10,000,000+ ထည့်သွင်းရန် | သုံးသပ်ချက်မျာ
ဒေါင်းလုပ် APK（16.1MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Color Call Flash- Call Screen Call Phone LED Flash
Color Call Flash - ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဖုန်း flash LED
😀😀 အရောင်ခေါ်ဆိုမှု flash - ခေါ်ဆိုမှုဖန်သားပြင်ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းဖုန်း LED မီး Flash သည်အကောင်းဆုံးခေါ်ဆိုမှုမျက်နှာပြင်ပြုလုပ်သူဖြစ်ပါသည်။ ခ> အလှအပခေါ်ဆိုမှုဖုန်း flash themes များ နှင့် LED Flash အသိပေးချက် ။
😀😀Color Call Flash - ခေါ်ဆိုမှုမျက်နှာပြင်ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းဖုန်း LED Flash သည်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများအတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောမျက်နှာပြင်မီးပွားတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်အဝင်ခေါ်ဆိုမှုခံရသည့်အခါသင်သည် သင်၏အထူးခေါ်ဆိုမှုဖုန်းမျက်နှာပြင် ကိုဖန်တီးသည်။ သင့်အတွက်လှပပြီးထူးခြားသောအရောင်ခေါ်ဆိုမှုအကြောင်းအရာများစွာသည်သင်၏ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း flash ကိုပိုမိုရောင်စုံစေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အလှအပရောင်စုံဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းစိတ်ကြိုက်အမျိုးအစားများကိုပေးသည်။
your သင်၏ Android စက်ပစ္စည်းအတွက် Color Call Flash ။ သင်အကြိုက်ဆုံးအရောင်ဖြင့်ခေါ်ဆိုမှု flash themes များကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲ။ လိုက်နာရုံနှင့် သည်ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းကိုဘယ်တော့မှလက်လွှတ်မည်မဟုတ်ပါ။ အံ့သြဖွယ်ခေါ်ဆိုမှု flash ကိုဆောင်ပုဒ်!
you အံ့သြဖွယ်ခေါ်ဆိုမှုဖုန်း flash flash များ။ Beauty and Cooler ခေါ်ဆိုသူ၏ဖုန်းမြည်သံ။ incom အဝင်ခေါ်ဆိုမှုများ၌ထူးခြား။ အရောင်အသွေးရှိသောခေါ်ဆိုမှုမျက်နှာပြင်အကြောင်းအရာများ you LED မီးအလင်းရောင်ခေါ်ဆိုမှုကိုသင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
📌အရောင်ခေါ်ဆိုမှုအကြောင်းအရာများသည်ဘယ်တော့မှဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကိုလက်လွှတ်မည်မဟုတ်ပါ။ ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့သတိပေးပါလိမ့်မည်။ 📌လူကြိုက်များသောဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း flash effect သည်သင်၏ခေါ်ဆိုမှုများကိုအထူးပြုလုပ်သည်။ အပတ်တိုင်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအရောင်ဖုန်းအမျိုးအစားများကိုအသစ်ပြောင်းမည်။ 📌 Call အရောင်ခေါ်ဆိုမှုဖလက်ရ်ှကိုမျှဝေပါ - ခေါ်ဆိုမှုမျက်နှာပြင်၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အတွက် LED မီးပွိုင့်ကိုမျှဝေပါ။
ဖုန်းအရောင်ခေါ်ဆိုသူ၏မျက်နှာပြင်ပုံစံကိုပြောင်းလဲခြင်း Color Call Flash - ခေါ်ဆိုမှုမျက်နှာပြင်၊ ဖုန်းဖုန်း၊ LED မီးရောင်နှင့် android ဝင်လာသောခေါ်ဆိုမှုမျက်နှာပြင်၏အဓိကအကြောင်းအရာကိုဖန်တီးပါ။ သင်၏သူငယ်ချင်းများကသင်၏ဘ ၀ ကို ပို၍ အရောင်တောက်စေလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းပြီးအခမဲ့ဖြစ်သည်၊ အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်။
၎င်းကိုကူးယူပြီးပါကအကြောင်းအရာအသစ်များကိုပုံမှန် update လုပ်ပါမည်။ Colour Call Flash ကိုခံစားပါ - Call Screen, Call Phone, LED Flash ကိုသူငယ်ချင်းများနှင့်မျှဝေပါ။
✨ ဆက်သွယ်ရန် : ✨
သင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အကြံပြုချက်အချို့ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ [email protected] ။ အကယ်၍ သင် app ကိုနှစ်သက်လျှင်ကြယ် ၅ ပွင့်ပေးပါ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်!
ဘာအသစ်လဲ Color Call Flash- Call Screen Call Phone LED Flash 4.9
रोज Call आता है करो ऐसा Setting लोग पूछेंगे कैसे किया बता ना
Incoming call screen beautiful Theme.Call Flash, Color Phone Flash,LED Call Screen.
KOWSHIK TECH Expert
Zaw min Myitthar